2019 – Year – Alpha Premium
Heirs of the Night ##Unicode သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်မျိုးနွယ်စုတွေကြားမှာ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာ မျိုးနွယ်စုအများစုမျိုးတုန်းပျောက်ကွယ်သွားပြီး ဒရက်ကာ နော့စ်ဖဲရက် ပိုင်းရက်စ် လိုင်ကာနာ ဗိုင်းရက်နဲ့ ဗမာလီယာဆိုတဲ့မျိုးနွယ်စုတွေပဲကျန်ရှိပါတယ် ဒါ့အပြင်သူတို့ဟာမူလဒရက်ကူလာသခင်ကြီးဆီကနေ ထူးခြားစွမ်းအင်ရှိတဲ့ပတ္တမြားတွေလည်းရရှိထားကြပါတယ် ဒါပေမယ့်တစ်နေ့မှာတော့ ရှေ့ဖြစ်ဟောသူတစ်ယောက်ဟာ မျိုးနွယ်စုအချင်းချင်းစည်းလုံးမှုမရှိရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာ အားလုံးမျိုးတုန်းပျောက်ကွယ်သွားမယ်လို့ဟောကိန်းထုတ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့ဒရက်ကာမျိုးနွယ်ကနေ ဦးဆောင်ပြီးမျိုးနွယ်စုတွေအားလုံးကိုစည်းရုံးပါတယ် မျိုးနွယ်စုအားလုံးရဲ့ဆက်ခံသူအချင်းချင်းစည်းလုံးသွားအောင် ဗန်ပိုင်းယားကျောင်းတော် ဆိုပြီးတည်ထောင်လိုက်ပါတော့တယ် ဆက်ခံသူတွေဟာမျိုးနွယ်စုတွေမပျောက်ကွယ်အောင်တကယ်ဘဲလုပ်ဆောင်သွားနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာပါ ##zawgyi ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္မ်ိဳးႏြယ္စုေတြၾကားမွာ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ မ်ိဳးႏြယ္စုအမ်ားစုမ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး ဒရက္ကာ ေနာ့စ္ဖဲရက္ ပိုင္းရက္စ္ လိုင္ကာနာ ဗိုင္းရက္နဲ႔ ဗမာလီယာဆိုတဲ့မ်ိဳးႏြယ္စုေတြပဲက်န္ရွိပါတယ္ ဒါ့အျပင္သူတို႔ဟာမူလဒရက္ကူလာသခင္ႀကီးဆီကေန ထူးျခားစြမ္းအင္ရွိတဲ့ပတၱျမားေတြလည္းရရွိထားၾကပါတယ္ ဒါေပမယ့္တစ္ေန႔မွာေတာ့ ေရွ႕ျဖစ္ေဟာသူတစ္ေယာက္ဟာ မ်ိဳးႏြယ္စုအခ်င္းခ်င္းစည္းလုံးမႈမရွိရင္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အားလုံးမ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ္လို႔ေဟာကိန္းထုတ္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္မလို႔ဒရက္ကာမ်ိဳးႏြယ္ကေန ဦးေဆာင္ၿပီးမ်ိဳးႏြယ္စုေတြအားလုံးကိုစည္း႐ုံးပါတယ္ မ်ိဳးႏြယ္စုအားလုံးရဲ႕ဆက္ခံသူအခ်င္းခ်င္းစည္းလုံးသြားေအာင္ ဗန္ပိုင္းယားေက်ာင္းေတာ္ ဆိုၿပီးတည္ေထာင္လိုက္ပါေတာ့တယ္ ဆက္ခံသူေတြဟာမ်ိဳးႏြယ္စုေတြမေပ်ာက္ကြယ္ေအာင္တကယ္ဘဲလုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာကိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမွာပါ Review – Aye Htut Ko File Size – 350MB around (per episode) Format…mp4 Quality : 720p WEB-DL Genre : Sci-Fi & Fantasy, Family, Mystery Subtitle : Myanmar Subtitle ( hardSub) Translated by Phyu Sin,Hmue Encoded by Arrow ============================================================ Episode 1 (350MB) 720p mediafire / Alphadrive Episode2(350MB) 720p mediafire ...
His Dark Materials His Dark Materials Season 1 (8) His Dark Materials Season2(7) His Dark Materials ဆိုတဲ့ series ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်ကကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဝက်ဝံနှစ်ကောင်ဖိုက်ကြတဲ့ the golden compass ဆိုတဲ့ကားရဲ့ extended series ပေါ့ ဒီဇာတ်လမ်းအခြေတည်ထားတဲ့ Universe ကိုကအဆန်း လူတွေက ရုပ်နဲ့ နာမ် ပေါင်းစည်းနေရမဲ့အစား သူတို့ နာမ် တနည်းအားဖြင့် soul က တိရစ္ဆာန်တွေအဖြစ်တည်ရှိနေတယ် လူတိုင်းမှာ soul creature တစ်ကောင်စီရှိကြတယ် အဲ့ soul creature ကို daemon လို့ခေါ်တယ် daemon တွေဟာ သူ့ခန္တာပိုင်ရှင် စိတ်နေသဘောထားအတိုင်း form အမျိုးမျိုးလိုက်ပြောင်းကြတယ် ခန္တာပိုင်ရှင် အရွယ်ရောက်သွားမှ သူတို့နောက်ဆုံး form မှာပဲအနည်ထိုင်သွားကြတယ် ဇာတ်လမ်းအစမှာကတည်းက လိုင်ရာဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ သူ့ daemon ကိုတွေ့ရမှာပါ series ဖြစ်တဲ့အတွက် plot ပိုင်းတော့သိပ်မပြောတော့ဘူး extraordinary ဖြစ်တဲ့ story ကိုမှကြည့်ချင်သူတွေအတွက်တော့ရှယ်ပဲ တစ်ကားလုံးအဆန်းတွေကြီး harry potter တို့လိုမဟုတ်ပဲ other universe ...
TMDb: 8.1/10 684 votes
The Mandalorian SEason 1+2 ဒစ်စနေးရဲ့ ပွဲဦးထွက် စတားဝါးစ် စီးရီးလာပါပြီ။ အတော်ကို လန်းပါတယ်။ စတားဝါးစ်ဖန်တွေ အကြိုက်တွေ့မှာပါ။ အထူးပြုလုပ်ချက်တွေနဲ့ အကောင်တွေ ယာဉ်တွေ လုပ်ထားတာ အတော်ကိုကောင်းပါတယ်။ စီးရီးဆိုပေမယ့် ရုပ်ရှင့်အဆင့်နီးပါး ဖန်တီးထားတာပါပဲ။ တိုက်ခိုက်ခန်းတွေကလည်း တကယ့် စတားဝါးအငွေ့အသက်ကို ရမှာပါ။ ကြည့်လေလေ သဘောကျလေလေပါပဲ။ ဇာတ်လမ်းကတော့ တစ်ပိုင်းထဲနဲ့ ကောင်းမကောင်း ပြောဖို့ခက်ပါသေးတယ်။ အပိုင်း ၁ ရဲ့ အခြေအနေအရတော့ မေးခွန်းတွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းနေတုန်းပါပဲ။ ဒီစီးရီးရဲ့ အချိန်ကာလကတော့ စတားဝါးစ် ၆ – ရီထန်းအော့ဖ်သယ်ဂျဒိုင်း အပြီးကနေ စတင်ထားတာပါ။ ဆရာယိုးဒါး၊ အင်ပါယာ၊ ဒါ့သ်ဗိတ်ဒါတို့ သေဆုံးပြီးသွားခဲ့ပါပြီး။ ဆရာယိုးဒါးဟာ အသက် ၉၀၀ ဝန်းကျင်မှာ သေသွားခဲ့တာပါ။ ဒါကိုလည်း အကြောင်းရှိလို့ ပြောပြတာပါ။ စီးရီးရဲ့ နာမည် မန်ဒါလိုရီးယန်း ဆိုတာ စတားဝါးစ်ရဲ့ နာမည်ကျော် မျိုးနွယ်စု တစ်ခုနာမည်ပါပဲ။ သူတို့တွေဟာ နာမည်ကျော် ချပ်ဝတ်အင်္ကျီတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကျွမ်းကျင်ကြလို့ ကျော်ကြားပါတယ်။ စတားဝါးစ် နံပါတ် ၅ အင်ပါယာ စထရိုက်ဘက်မှာ မိတ်ဆက်သွားတာကို တွေ့မှာပါ။ နောက်ပြီး စတားဝါး ၂ – ကလုန်းစစ်ပွဲမှာလည်း ပါပါတယ်။ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ဘော့ဘာဖက်ထ်ရဲ့ ကာရိုက်တာကို လူကြိုက်များလာတဲ့အတွက် မန်ဒါလိုရီးယန်း ဇာတ်လမ်းတွေ ထပ်ပြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါပဲ။ ဒီအထဲမှာ ...
TMDb: 8.5/10 4346 votes
The Mandalorian SEason 1+2
Warrior Season 1+2 Complete ဟာ အပိုင်းရှည်တွေ မကြည့်ချင်ဘူးလေ ဆိုသူတွေ ကြည့်ချင်လောက်တဲ့ ၁၀ ပိုင်းထဲ နဲ့ အပြီးပါ… ဇတ်လမ်းကတော့ အားစမ်း ဆိုတဲ့ ဖြူဖြူပျော့ပျော့ တရုတ်လေး တစ်ယောက် တရုတ်အလုပ်ကြမ်းသမားတွေ နဲ့ အတူ လှေကြီးတစ်စင်း နဲ့ ဆန်ဖရစ်စစ်စကို ကိ ရောက်လာတဲ့ အချိန်က စတယ် ပြောရမှာပဲ တစ်ခြား အလုပ်ကြမ်းသမားတွေ နဲ့ မတူတာက သူက အလုပ်ကြမ်း လုပ်ဖို့ လာတာမဟုတ်ပဲ လူတစ်ယောက်ကို လာရှာတာပါ သူ့အနေနဲ့ ဒီမြို့ ရဲ့ တရုတ်တန်းကို ရောက်ဖို့ လိုနေပါတယ်… သိတဲ့ အတိုင်း အဖြူကောင်တွေက တရုတ်တွေကို နှိမ်တဲ့ အတွက် သင်္ဘောဆိပ်မှာတင် အရာရှိ ၃ ယောက်ကို ဝင်းချွန်း သိုင်း နဲ့ အမှောက်ချလိုက်ပါတယ်… IP Man ကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေဆို ဝင်းချွန်းသိုင်းကိုသိမှာပါ ဒီတရုတ်လေးက နယ်နယ်ရရ တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး အလုပ်သမားခေါင်း က အားစမ်း ရဲ့ လက်ရည်ကို တွေ့သွားတော့ တရုတ်တန်း က တရုတ်လူမိုက်တွေဆီ တဆင့် ထပ်ရောင်းလိုက်ပါတယ်… စလာကတည်းက ဒေါင့်မကျိုးတဲ့ ...
Warrior Season 1+2 Complete
Doom Patrol Doom Patrol Season 1 (2019) DCUရဲ႕ Superheroes seriesပါ။ Titans seriesတစ္ပုိင္းမွာပါဝင္ထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလူေတြကို Team တစ္ခုအေနနနဲ႕ထြက္လာဖို႕ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာ အခုေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၿပည့္ခဲ့ပါၿပီ… ႐ူးသြပ္တဲ့သိပၸံပညာ႐ွင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ဖန္တီးမႈေတြကေန ေပၚထြက္လာတဲ့ စြမ္းအား႐ွင္လူသားအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ေယာက္စီမွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်င္ကုိယ္စီ႐ွိၾကသလုိ ဇာတ္လမ္းကုိယ္စီနဲ႔ပါ။ မေတာ္တဆမႈတစ္ခုေက်ာက္ ျပစ္ခြၽဲခြၽဲမိစၦာတစ္ေကာင္အျဖစ္ေျပာင္းသြားတဲ့ 1950ခုႏွစ္ကမင္းသမီး Rita Farr ကားေမွာက္ရာကေန ဦးေႏွာက္တစ္ခုပဲအေကာင္းအတုိင္း႐ွင္က်န္ရစ္ရာကေန Chiefရဲ႕ကူညီမႈေၾကာင့္ Robotmanျဖစ္သြားတဲ့ Cliff အာကာသယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ Negative Manျဖစ္သြားရတဲ့ Larry လူတစ္ကုိယ္တည္းနဲ႔စိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနတဲ့ Crazy Jameနဲ႔ Cyborgတူိ႔ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္အပုိင္းမွာေတာ့ Cyborgမပါေသးပါဘူး။ လူေတြနဲ႔ေဝးရာအရပ္မွာေနထုိင္ရင္းနဲ႔ တစ္ေန႔မွာ သူတုိ႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ႐ွိတုန္း အျပင္ေလာကႀကီး ထြက္လည္လုိက္ရာကေန ျပႆနာေတြကုိဖိတ္ေခၚလုိက္သလုိျဖစ္သြားခဲ့ပါေတာ့တယ္။ ================================================= Season 1 အဆုံးမှာ Mr.Nobody နဲ့ ရင်ဆိုင်ပြီးတဲ့နောက် ပန်းချီကားထဲကနေ ပြန်ထွက်လာကြတဲ့အခါ အားလုံးက Danny Street အပါအဝင် အားလုံးက ပိစိကွေးလေးတွေဖြစ်သွားကြပါတယ်။ First Episode ...
TMDb: 7.6/10 688 votes
Detective L ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း ၁၉၃၀ ခုႏွစ္မ်ားက ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕မွာ ဇတ္အိမ္ဖြဲ႕ထားပါတယ္။ စုစုေပါင္း အပိုင္း ၂၄ ပိုင္းရွိတဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္သဲဖို စုံေထာက္ဇတ္လမ္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ရွိန္ထိုးတိုးတက္လာတဲ့ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမွာ ထူးဆန္းတဲ့ ရာဇဝတ္မႈခင္းေတြလဲ ျဖစ္ေပၚလာလာပါတယ္။ Qin Xiaoman လို႔အမည္ရတဲ့ လွပတဲ့ရဲေမကေလးဟာ ရဲသင္တန္းေက်ာင္းဆင္းခါစ တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ စုံေထာက္အဖြဲ႕ႀကီးမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရပါတယ္။ အဲဒီမွာပဲ နာမည္ေက်ာ္စုံေထာက္ႀကီး Luo Fei ဟာ သူမရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာသလို အိမ္နီးနားခ်င္း တစ္ဦးျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ တ႐ုပ္ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္လို႔ပဲေျပာရမလား အဂၤလိပ္ ရွားေလာ့ဟုမ္း နဲ႔ပဲ ႏႈိင္းရမလား။ ဇာတ္ကားမွာ ဆက္လက္အားေပးၾကပါစို႔လားရွင္။ ခင္မင္စြာျဖင့္ Joanne Win
Auto Shankar ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အများမျော်လင့်နေတဲ့ တမီးလ် စီးရီးဇာတ်လမ်းတစ်ခု‌ဖြစ်တဲ့ Auto Shanker ‌ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းကတော့ ရှန်ကာဆိုသူလူငယ်လူရွယ်လေးက ကားမောင်းရင်း မိသားစုကိုရုန်းကန်ကျွေးမွေးနေတာပါ ဒါပေမယ့် ရှန်ကာဆိုသူ လူငယ်ကတော့ အကြံတော့ကြီးပါတယ် သူ့ဘဝကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် အောင်မြင်ချင်တယ် ကြီးပွားချင်တယ် ဒီလိုနဲ့ သူတို့နယ်မှာ လွှတ်တော်ပါတီဝင်တစ်ဦးရဲ့ သားမက်ဦးစီးတဲ့ အရက်ချက်ဈေးကွက်ကို မသမာတဲ့နည်းနဲ့ အရယူပါတော့တယ် အဲ့ဒီကမှတစ်ဆင့်တက်ပြီး သူတို့နယ်ရဲ့ ပြည့်တန်ဆာဈေးကွက်ကိုလဲ မရရတဲ့နည်းနဲ့ အပိုင်သိမ်းပြီး အရင်ကမိသားစုအတွက်ကြိုးစားတဲ့ ရှန်ကာတစ်ယောက်ဟာပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ် ဒီလိုနဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေမာနတွေ အာဃာတ တရားတွေ အင်မတန်မှများတဲ့ လူတွေကို ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ဘဝကိုအနိုင်ယူရမလဲ‌ဆိုတာကို ရသအစုံနဲ့ကြည့်ရှုရမယ့် ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ အမ်ားေမ်ာ္လင့္ေနတဲ့ တမီးလ္ စီးရီးဇာတ္လမ္းတစ္ခု‌ျဖစ္တဲ့ Auto Shanker ‌ဆိုတဲ့ဇာတ္ကားေလးကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းကေတာ့ ရွန္ကာဆိုသူလူငယ္လူ႐ြယ္ေလးက ကားေမာင္းရင္း မိသားစုကို႐ုန္းကန္ေကြၽးေမြးေနတာပါ ဒါေပမယ့္ ရွန္ကာဆိုသူ လူငယ္ကေတာ့ အႀကံေတာ့ႀကီးပါတယ္ သူ႔ဘ၀ကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ျမင္ခ်င္တယ္ ႀကီးပြားခ်င္တယ္ ဒီလိုနဲ႔ သူတို႔နယ္မွာ လႊတ္ေတာ္ပါတီ၀င္တစ္ဦးရဲ႕ သားမက္ဦးစီးတဲ့ အရက္ခ်က္ေဈးကြက္ကို မသမာတဲ့နည္းနဲ႔ အရယူပါေတာ့တယ္ အဲ့ဒီကမွတစ္ဆင့္တက္ျပီး သူတို႔နယ္ရဲ႕ ျပည့္တန္ဆာေဈးကြက္ကိုလဲ မရရတဲ့နည္းနဲ႔ အပိုင္သိမ္းၿပီး အရင္ကမိသားစုအတြက္ႀကိဳးစားတဲ့ ...
Great Men Academy Great Men Academy" မြန်မာစာတန်းထိုး အစ/အဆုံး ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ကားလေးကတော့ 9x9 အဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပြီး My Drama List မှာ Rating 8.4 ထိ ရရှိထားတဲ့ ကားကောင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ .... Great Men Academy ဆိုတဲ့ခမ်းနားလှတဲ့ကျောင်းကြီးရဲ့ ဝင်ခွင့်အမှတ်ကမြင့်လွန်းတဲ့အပြင် ဒီကျောင်းမှာ တက်‌ရောက် ခွင့်ရတဲ့သူတွေက အလုပ်အကိုင်ကောင်းကောင်း နဲ့ လစာကောင်းကောင်းရကြပါတယ် .... ဒီကျောင်းမှာ တနှစ်တစ်ခါ The Greatest ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးကို Live လွှင့်ကာ အတော်ဆုံးသူတစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်ပေးပါတယ် ..... အတော်တကာ့အတော်ဆုံးသူသာ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရလေ့ရှိပါတယ် .... အနိုင်ရတဲ့သူကသာ Unicorn ဆီကဆုတစ်ခု တောင်းခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် .... Great Men Academy ကျောင်းကြီးဘေးမှာ ရေကန်ကြီးတစ်ကန်ကြီးရှိပြီး ရေကန်ဘေးမှာ ထင်းရှူးတောအုပ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ် .... ရေကန်ကြီးရဲ့ တစ်ဖက်တောအုပ်လေးထဲမှာနေတဲ့ လက်ဖ် ဆိုတဲ့ကောက်မလေးတစ်ယောက် The Greatest ပြိုင်ပွဲကိုကြည့်မိပြီး ၂နှစ်ဆက်တိုက် အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ ဝီယာ့ ကိုသဘောကျသွားခဲ့တယ် .... တစ်နေ့ ရေကန်ဘေးမှာ လမ်းလျှောက်နေတုန်း ဆူးစူးနေတဲ့ Unicorn ကိုကူညီပေးခဲ့လို့ ဆုတစ်ခု တောင်းခွင့် ရခဲ့တယ် .... အချစ်ရေးမှာကံကောင်းပါရစေဆိုတဲ့ သူမရဲ့ ...
High Seas Season 1+2+3 Complete High Seas ( Season –3) နက်ရှိုင်းတဲ့ ပင်လယ်ကြီးထဲကို တစ်ခေါက် အလည်ပြန်ထွက်ရပြန်ပါပြီဗျာ။ ဗီလာနွေဗာတို့ ညီအမဟာ ဘာဘရာ ဒီ ဘရက်ဂန်ဇာ သင်္ဘောကြီးနဲ့ ခရီးထွက်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာပြန်ပါတယ်။ ကာရိုလီနာ ကတော့ ဖာနန်ဒိုနဲ့ အကြောင်းပါသွားပါပြီ။ အယ်ဗာ နဲ့ နီကိုးလက်စ် တို့က သူငယ်ချင်းလို့ပဲ ဆက်၍ ခေါ်နေဆဲပါပဲ။ အယ်ဗာကတော့ နာမည်ကျော် စာရေးဆရာမ ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ ခရီးစဉ်အသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဇာတ်ကောင်အသစ်တွေ ပါလာခဲံပါတယ်။ အခုကတော့ ဗိုင်းရပ်စ်ရာသီပဲ ဖြစ်နေလို့လား မသိပါဘူး။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာလည်း သင်္ဘောပေါ် ဗိုင်းရပ်စ်ပါတာကို အခြေတည်ထားပါတယ်။ သင်္ဘောပေါ်မှာ ဗိုင်းရပ်စ် တကယ်ပါရဲ့လား မပါဘူးလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဆက်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။ စပိန်ကားတွေထုံးစံပီပီ စပွိုင်းရင် အကုန်ပေါ်သွားမျာမို့ပါ။ အရင်ဇာတ်လမ်းတွေလိုပဲ မမျှော်လင့်တဲ့ အချိုးအကွေ့တွေနဲ့ သင်္ဘောကြီးတစ်စီးကို အတူတူ စီးလိုက်ရအောင်ပါ. Season4ကိုတော့ နဂို စီစဉ်ထားပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ မဆက်တော့ဘူးလို့ Netflix က ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်တဲ့။ အတွဲ – ၃ နဲ့ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
High Seas Season 1+2+3 Complete
Secret Garden 🍁လျှို့ဝှက်ဥယျာဉ်🍁 💕Secret Garden 2019 series💕 ဒီတခါမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ မကြာသေးခင် 2019 ကမှထုတ်လွှင့်ပြသသွားခဲ့တဲ့ Admin တို့ရဲ့အသဲကျော်လေး Baifern ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းတကားပဲဖြစ်ပါတယ်😍 ဇာတ်လမ်းပုံစံလေးကတော့ 🙈 ဇီဇာကြောင်မင်းသားရယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ အရမ်းကိုမာနကြီးပြီးမောက်မာတတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သူဌေးသား ထာနပ်နဲ့… မိဘတွေမရှိတဲ့နောက်ကိုယ့်ဘဝကိုယ်ကျောင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးရင်းမင်းသမီးတွေကိုယ်စား စတန့်မင်းသမီးအနေနဲ့သရုပ်ဆောင်ပေးရင်း ဘဝကိုရုန်းကန်နေရတဲ့ဘဝသမားလေး ဗီနာတို့ ဟာ အခြေအနေတစ်ခုကြောင့်မရည်ရွယ်ထားပဲ ဆုံတွေ့ရဖို့အကြောင်းဖန်လာပါတယ်… အဲ့ဒီ့နောက်မှာတော့ သူဌေးသားနဲ့ဆင်းရဲသမလေးဟာ ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကြောင့်မမျှော်လင့်ထားပဲ ခန္ဓာကိုယ်ချင်းလွဲသွားကြပါတော့တယ်… ထာနပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဗီနာ ဗီနာ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထာနပ်တို့ရဲ့အလွဲအချော်တွေ လွဲချော်မှုတွေကြားက သူတို့ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းကရော ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာဦးမှာလဲ…🙈
My Love From Another Star ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ My Love From Another Star ဆိုတဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲလေးကို တရားဝယ်ဝင်ပြီး ထိုင်းက remake လုပ်ပြီး အသက်သွင်းပုံဖော်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ မင်းသား Nedach နဲ့ မင်းသမီး Matt တို့ ဦးဆောင်ပါဝင်ထားပါတယ်နော် တစ်ခုသတိပေးချင်တာကတော့ ဒီဇာတ်လမ်းသည် အရင်ကိုရီးယားဇာတ်ကားကို လုံးဝကော်ပီ ယူရိုက်ထားတာ လုံးဝ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူးနော် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ အာချီရာဆိုတဲ့ ဂြိုလ်သားလေးတစ်ယောက်က သူနေထိုင်ရာ ကြယ်ကမ္ဘာကနေ ကမ္ဘာမြေပေါ်က မျိုးကွဲတွေကို သုတေသနလုပ်ဖို့အတွက် အပေါင်းအပါတွေနဲ့အတူ အာကာသယာဉ်တစ်စီးနဲ့ ကမ္ဘာမြေကို လာခဲ့ပါတယ်..... သူ ကမ္ဘာမြေပေါ်ကို ရောက်ရောက်ချင်းမှာ မိန်းမငယ်လေးတစ်ဦးကို တွေ့ခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီမိန်းမငယ်လေးက ကံဆိုးမှုတွေယူဆောင်လာတယ်လို့ လူတွေသတ်မှတ်ခြင်းခံရကာ နယ်နှင်ဒဏ်ပေးခံခဲ့ရပါတယ်.... ဒီလိုနဲ့ သူ စီးလာတဲ့ မြင်းလှည်းက အရှိန်ပြင်းပြင်းရိုက်ခတ်လာတဲ့ လေအဟုန်ကို ကြောက်ရွံ့သောကြောင့် ဆောက်တည်ရာမရပဲ ပဲ့မဲ့ကာပြေးထွက်သွားခဲ့ပါ တော့သည်........ ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ပြေးနေသော မြင်းလှည်းထဲက မိန်းမငယ်လေး နှင့် စိတ်ပေါက်ရာပြေးနေမိတဲ့ မြင်းတွေ..... ပြေးရင်း ပြေးရင်း သွားရင်း သွားရင်းနဲ့ တစ်ခုသော ချောက်ကမ်းပါးသို့ ရောက်သွားပါတော့တယ်...... အရှိန်လည်းပါ လမ်းမှာလည်း ချောက်အတိမို့ မြင်းတွေလည်း မြင်းလှည်းကို မထိန်းချုပ်နိုင်ရာ ခြောက်ကမ်းပါသို့ ပြုတ်ကျရန် ...
Black Summer ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း ဒီကားမွာေတာ့ စစျခင္း ဘာျဖစ္တာမွန္း မသိေအာင္ ႐ိုက္ထားပါတယ္။ ေရာဂါလား ေရဒီ႐ို ဓါတ္သင့္တာလား Government project လား ေဝခြဲ လို႔မရေအာင္ အစပ်ိဳးထားပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေသးေသးေလးမွာ မို႔ Zombie ေတြကို အႁပြတ္လိုက္မျမင္ရေပမဲ့ ေတြ႕ဖူးသမွ် Zombie ေတြထဲမွာ ဥာဏ္ေတာ္ေတာ္ရွိၿပီး အားသန္တာေတြ ပါပါတယ္။ ပထမဆံုး ဇာတ္ေကာင္ Rose ရဲ႕ အေၾကာင္းကို Rose ဆိုၿပီး က႑ ခြဲၿပီးရွင္းျပတာကို ထူးဆန္းစြာေတြ႕ရမွာပါ သူ႔သမီးရယ္ သူ႔ေယာက်ာ္းရယ္နဲ႕ အႏၲရာယ္ ကင္းတဲ့ေနရာ ကို ထြက္ေျပးမဲ့ အခ်ိန္မွာ မထင္မွတ္တဲ့ ကိစၥေၾကာင့္ သူ႔သမီးေလးနဲ႔သူ ကြဲရသလို သူ႔ေယာက်ာ္းလဲ Zombie ျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ zombie ေတြဟာ တေကာင္နဲ႔တေကာင္ ကိုက္တာက မဟုတ္ပဲ ေသဆံုးရင္လဲ Zombie ျဖစ္တာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေရဒီယို ဓါတ္သင့္တာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ပိုထင္ပါတယ္။ ...
How to Sell Drugs Online (Fast) How to Sell Drugs Online (Fast)(2019/2020)Season 1 and Season2[ စ / ဆုံး] IMDb…..8.1 ဒီ TV Series က Netflix ကထုတ်တဲ့ ဂျာမန်စီးရီးတစ်ခုပါ။ Netflix က ခုနောက်ပိုင်း အားလုံးသတိထားမိလောက်အောင်ကို သူတို့ ရိုက်တဲ့စီးရီးတွေက ကြည့်ရ အတော်လန်းနေတာကို သိကြမှာပါ… Moritz Zimmerman ဆိုတာ အသက် ၁၇ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသား ပြီးတော့ nerd တစ်ယောက်။ Nerd ဆိုတာ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေကိုသာ ဖိလုပ်နေပြီး လူတွေနဲ့ရောရောထွေးထွေးမနေတတ်တဲ့သူတွေ။ ကြာတော့လူမှုရေးဘက်မှာလစ်ဟင်းလာပြီး စည်းအပြင်ကလူတစ်ယောက်လိုဖြစ်လာတယ်။ ကျောင်းတွေမှာလည်း အနိုင်ကျင့်ခံ အနှိမ်ခံလူတန်းစား။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေဟာ တစ်ခုခုကို ထွန်းပေါက်အောင်လုပ်ပြီဟေ့ ဆိုရင်လည်း လိုက်လို့မမှီအောင် ထက်မြက်လွန်း ကြတယ်။ ဒီထဲက အထိကဇာတ်လိုက်က အဲဒီလိုကောင်… Tech Nerd တစ်ယောက်။ သူ့သူငယ်ချင်း Lenny ကလည်း ...
The Umbrella Academy နက္ဖလစ္ရဲ႕ စူပါဟီးရိုး စီးရီးအသစ္တစ္ခု ၾကည့္လိုက္ရေအာင္။ ဒီစီးရီးရဲ႕ ဇတ္လမ္းကေတာ့ ရယ္ရမလို ငိုရမလိုပါပဲ။ ထူးထူးျခားျခားေလးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုးအရင္က ထြက္ဖူးတဲ့ Heroes စီးရီးနဲ႕ေတာ့ နည္းနည္းတူတယ္ေျပာလို႕ရပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြတုန္းက အင္တာနက္မွာ ထူးဆန္းတဲ့သတင္းတစ္ပုဒ္ဖတ္မိမွာပါ။ ေရကန္ထဲမွာေရကူးေနတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြ အလိုလိုကိုယ္ဝန္ရကုန္တဲ့ သတင္းေပ့ါ။ ဒီစီးရီးက အဲဒီသတင္းနဲ႕ပဲ စတင္ထားတာပါပဲ။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ တစ္ရက္ေန႕ ၁၂ နာရီအခ်ိန္မွာ ကမာၻအႏွံ႕က အမ်ိဳးသမီး ၄၂ ေယာက္ဟာ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ဘဲနဲ႕ တျပိဳင္တည္း ကေလးတစ္ေယာက္စီ ေမြးဖြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ရီဂ်င္နယ္ ဟားဂရိ ဆိုတဲ့ လူထူးဆန္းဘီလီယံနာသူေဌးၾကီးတစ္ဦးကေတာ့ အဲဒီကေလးေတြကို ရႏုိင္သမွ် စုစည္းျပီး ေမြးစားခဲ့ပါတယ္။ သူ ရွာေတြ႕ခဲ့တာ စုစုေပါင္း ၇ ေယာက္ပါပဲ။ အဲဒီလို ေမြးဖြားလာတဲ့ကေလးေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ သူတို႕အားလံုးကို ေလ့က်င့္ေပးျပီး အမ္ဘရဲလားအကယ္ဒမီလို႕နာမည္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အားအရမ္းၾကီးသူ၊ ေျပာသမွ်ကို လူတိုင္းနားမေထာင္ဘဲမေနႏိုင္ေစတဲ့သူ၊ ...
TMDb: 8.2/10 710 votes
Doctor Prisoner 32 Episodes ဇာတ်လမ်း အကျဉ်း လေးကတော့ ... စစထွက်ချင်းမှာပဲလူပြောများခဲ့ပြီး My Drama list မှာ 8.4ထိရရှိထားတဲ့ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ Cross(ဆန့်ကျင်ဘက်)လိုကားမျူ ိးကြိုက်နှစ်သက်သူများ လုံးဝလက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ကားပါပဲလို ့ပြောချင်ပါတယ် မင်းသားအနေနဲ့ကတော့ ကိုလူချောထဲက Nam Goong Minနဲ့ တရားသူကြီးမင်းထဲကမင်းသမီးလေး Nara တို့ဖြစ်ပါတယ် နာရီဂျေး ဆိုတဲ့ဆရာဝန်ဆိုရင် ထယ်ဂန်းဆေးရုံက မသိတဲ့သူ မရှိသလောက်ပါပဲ ရုပ်ချော သဘောကောင်း ဆင်းရဲသားပိုက်ဆံမတက်နိုင်သူတွေကိုလဲ မေတ္တာထား အိပ်စိုက် ကုသပေးတဲ့သဘောဖြူတဲ့ဆရာဝန်လေးပါ အမေအိုကြီးအတွက် ဆေးကုသစရိတ်ကိုရှာဖွေနေရသူလဲဖြစ်ပါတယ် ဆေးကုရမှာ အလွန်တော်သူလဲဖြစ်ပါတယ် တချက်လေးစမ်းသပ်လိုက်တာနဲ့ ဘာရောဂါဆိုတာတန်းသိသူမို့ ထယ်ဂန်းဆေးရုံရဲ့ အတော်ဆုံး ဆရာဝန်ဆိုလဲမမှားပါဘူး >>> တစ်နေ့ အထက်လူကြီးအကူအညီနဲ့ သူ့အမေကို ထယ်ဂန်းဆေးရုံမှာ အလကားခွဲစိတ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ် သူ့အတွက်တော့ အပျော်ဆုံးပေါ့ အဲ့နေ့မှာပဲ သူနဲ့ ခင်မင်တဲ့ဆင်းရဲလင်မယားကို (ဇနီးသည်က ကိုယ်ဝန်သည်)ကို သူက သူ့အိပ်စိုက်ပြီး ထယ်ဂန်းဆေးရုံမှာ သားဖွားဖို့ပြောလိုက်တယ်ပျော်ရွှင် နေတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက် ပျော်လို့ပင် မဝသေးခင်မှာပဲ ...